बादलका प्रकारहरू र उनीहरूका विशेषताहरू के हुन्? नेटवर्क मौसम विज्ञान
आकाश हेरेर बादलहरु हेर्नु सब भन्दा साधारण छ। बादलहरू केवल वर्षा र आँधी तूफानको सूचक मात्र हुन्, तर तिनीहरूले हामीलाई मौसम विज्ञानको बारेमा जानकारी दिन सक्छन्। त्यहाँ फरक छन् बादल को प्रकारहरु आकाश मा र प्रत्येक एक अलग विशेषताहरु र प्रशिक्षण शर्तहरु छन्। यस लेखमा हामी विभिन्न प्रकारका बादलहरूको अध्ययन गर्न गइरहेका छौं, उनीहरूको अर्थ के हो र किन तिनीहरू गठन गर्छन्।
के तपाईं बादलहरूका प्रकारहरूको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ? पढिरहनुहोस् र तपाइँ सबै कुरा पत्ता लगाउनुहुनेछ।
1 कसरी बादल फारामहरू
2 उच्च बादल
3.2 उच्च स्ट्र्याटस
4 कम बादलहरू
5 बादलहरू ठाडो विकास
5.1 कमुलस बादलहरू
कसरी बादल फारामहरू
हामीले बादलका प्रकारहरू वर्णन गर्न थाल्नु अघि हामीले तिनीहरू कसरी गठन हुन्छन् भनेर वर्णन गर्नुपर्दछ। आकाशमा बादलहरू हुनको लागि, त्यहाँ हावा चिसो हुनुपर्दछ। "लुप" सूर्यबाट सुरू हुन्छ। सूर्यको किरणहरूले पृथ्वीको सतह ताप्दा, तिनीहरूले वरपरको हावा पनि तताउँछ। उच्च-तापमान हावा कम घन हुन्छ, त्यसैले यो बढ्छ र चिसो, न्यानो हावा द्वारा प्रतिस्थापन। जब तपाईं उचाईमा जानुहुन्छ, वातावरणीय थर्मल ग्रेडिएन्टले कम तापक्रम निम्त्याउँछ। यस कारणले, हावा चिसो छ।
जब यो हावाको चिसो तहमा पुग्छ, यो पानीको बाफमा सden्घर्ष गर्दछ। यो पानी बाफ ना the्गो आँखामा अदृश्य छ, किनकि यो पानीको थोपा र हिउँ कणहरू मिलेर बनेको छ। कणहरू आकारमा यति सानो छन् कि तिनीहरू हावामा हल्का ठाडो प्रवाहहरूको अधीनमा राख्न सक्षम छन्।
विभिन्न प्रकारका बादलहरूको संरचना बीचको भिन्नता सघन तापमानको कारण हो। त्यहाँ केहि बादलहरू छन् जुन उच्च तापक्रममा बनेका हुन्छन् र केहि कम। कम गठन तापमान, "बाक्लो" बादल हुनेछ। त्यहाँ केहि प्रकारका बादलहरू छन् जुन दिईन्छ वर्षा र अरू छैन कि।
यदि तापमान धेरै कम छ भने, क्लाउड जुन रूपहरू बरफ क्रिस्टलले बनेको हुन्छ।
बादल गठनलाई असर गर्ने अर्को कारक हावा चाल हो। वायु विश्राममा हुँदा बादलहरू तहहरूमा वा स्ट्रट्यामा देखा पर्दछन्। अर्कोतर्फ, ती जो हावा वा हावाको बीचमा दृढ ठाडो प्रवाहको साथ बनेको हुन्छ यसले ठूलो ठाडो विकास प्रस्तुत गर्दछ। सामान्यतया पछिल्लो वर्षाको कारण र हो तूफान.
हामी विभिन्न प्रकारका बादलहरूलाई फरक पार्दैछौं जुन उचाईमा उनीहरू गठन गर्दछन्।
तिनीहरू सेता बादल, पारदर्शी र आन्तरिक छाया बिना छन्। तिनीहरू प्रख्यात «घोडाको पुच्छर as को रूपमा देखा पर्छन्। तिनीहरू बादलले बनेको केहि होइनन् आइस क्रिस्टल ऊनीहरूको उचाईको कारणले। तिनीहरू लामो, पातलो फिलामेन्ट्स जस्ता हुन् जुन समानान्तर रेखाको रूपमा अधिक वा कम नियमित वितरण गर्दछ।
यो आकाशमा हेर्दै नग्न आँखाले देख्न सकिन्छ र आकाशले ब्रश स्ट्रोकले चित्रित गरेको जस्तो देखिन्छ। यदि सम्पूर्ण आकाश सिरस बादलले ढाकिएको छ भने, सम्भावना छ कि आगामी २ 24 घण्टामा मौसममा एक तेस्रो परिवर्तन अनुभव हुनेछ। सामान्यतया, तिनीहरू प्राय: तापक्रममा कम हुने परिवर्तनहरू हुन्।
यी बादलहरूले लगभग निरन्तर तह बनाउँदछ जुन एक झिम्काइएको सतह देखा पर्दछ र गोलाकार आकारका साथ मानौं ती सानो सूती फ्लाकहरू हुन्। बादल पूरै सेतो छन् कुनै छाया प्रस्तुत नगरी। जब आकाशले यस प्रकारको बादलले ढाकिएको देखिन्छ, यो बोर भएको भनिन्छ। यो भेडा बुन्न जस्तै छ।
तिनीहरू प्राय सिरोस बादलको साथ देखा पर्छन् र संकेत गर्दछ कि मौसम करिब बाह्र घण्टा सम्म परिवर्तन हुन्छ। जब तिनीहरू देखा पर्छन्, आँधीबेहरी पहिले स्पष्ट रूपमा ती जहिले पनि उस्तै संकेत गर्दैन। यदि त्यसो हो भने, मौसम विज्ञान र मौसम पूर्वानुमान धेरै सजिलो हुनेछ।
तिनीहरू पहिलो दृश्यमा घुम्टो जस्तै देखिन्छन् जहाँबाट विवरणहरू छुट्याउन गाह्रो छ। कहिलेकाँही किनारहरू पनि याद गर्न सकिन्छ किनकि तिनीहरू लामो र चौडा कोरिएका छन्। तिनीहरू सजिलैसँग चिन्न सकिन्छ किनकि उनीहरू सूर्य र चन्द्रमा दुबै वरिपरि आकाशमा हलो बनाउँछन्। तिनीहरू प्राय: साइरस बादलहरूमा हुन्छन् र खराब मौसम वा केहि संकेत गर्दछ न्यानो निधार.
मध्य बादलका बिभिन्न प्रकारहरूमा हामी फेला पार्दछौं:
तिनीहरू मध्यम आकारको फ्लेक-आकारका बादलहरू छन् जुन अनियमित संरचनाको साथ छ। यी बादलहरूले तिनीहरूका तल्लो भागमा फ्लेक्स र लहरहरू गर्दछन्। Altocumulus खराब मौसम सुरू भएको संकेत गर्दछ या त वर्षा र आँधीबेहरी द्वारा।
यी पातलो तहहरू र केहि न्यानो क्षेत्रहरूको साथ बादल हुन्। प्राय जसो केसहरूमा सूर्य बादलको आवरणबाट देख्न सकिन्छ। उपस्थिति अनियमित स्पट जस्तै छ। तिनीहरूले राम्रो वर्षा पार्छन् तापक्रममा गिरावटको कारण।
तिनीहरू सतहको सब भन्दा नजिक छन्। ती मध्ये हामीसँग छ:
तिनीहरू अस्पष्टताको विभिन्न डिग्रीको साथ नियमित गाढा खैरो लेयरको रूपमा देखा पर्दछ। यो किनभने क्लाउडभरि घनत्व फरक-फरक हुन्छ। तिनीहरू वसन्त र गर्मी वर्षा को विशिष्ट हो। ती पनि रूप मा वर्षामा पाउन सकिन्छ निभ.
तिनीहरू ती हुन् जसलाई लम्बाइने सिलिन्डरहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। तिनीहरूसँग ग्रेका विभिन्न शेडहरूमा केही लहरहरू पनि छन्। यो पानी पार्ने विरलै मात्र हुन्छ।
राम्रोसँग परिभाषित संरचनाहरू हेर्न सक्षम हुनुको बिनाको एक खैरो धुन्ध को उपस्थिति हो। यससँग अस्पष्टताको बिभिन्न डिग्रीका केही बट्रेसहरू छन्। चिसो महिनाहरूमा तिनीहरू दिनभरि सहन सक्दछन्, ल्याण्डस्केपलाई अधिक उदासीन उपस्थिति प्रदान गर्दै। वसन्त comesतुमा तिनीहरू बिहान सबेरै देखा पर्छ र दिनभरि तितरबितर हुन्छ। राम्रो मौसम दर्साउँछ।
बादलहरू ठाडो विकास
यी बादलहरू हुन् जसले आकार र वर्षाको विशाल डिग्री प्रस्तुत गर्दछन्।
उनीहरूसँग डेन्सर उपस्थिति र धेरै चिह्नित छायाहरू छन्, सूर्य अवरुद्ध गर्ने बिन्दुमा। तिनीहरू खैरो बादलहरू हुन्। यसको आधार क्षैतिज छ, तर यसको माथिल्लो भागमा ठूलो प्रोट्रुसनहरू छन्। कम वातावरणीय आर्द्रता र थोरै ठाडो वायु आवागमन हुँदा कमुलस क्लाउडहरू राम्रो मौसमसँग मिल्दछन्। तिनीहरू वर्षा र आँधीबेहरी पैदा गर्न सक्षम छन्।
तिनीहरू ठूलो ठाडो विकासको साथ सबै भन्दा ठूला र सबैभन्दा ठूला-ठूला दृश्यहरू हुन्। तिनीहरू खरानी रंगको छन् र सूर्यलाई पूर्ण रूपमा ढाक्छ। यी विशिष्टहरू छन् जुन आँधीबेहरीमा देखा पर्छ र असिना उत्पादन गर्दछ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं क्लाउडहरू पहिचान गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » बादल » क्लाउड प्रकारहरू
राम्रो, कम बादलहरूको खण्डमा यो सहि हुँदैन, त्यहाँ तीन छन् (हानिरहित देखि खतरनाक देखिन्छ) पहिले त्यहाँ कम्युल्स छ जुन सानो सेतो बादल हो, त्यसपछि त्यहाँ कम्युलोनिम्ब्स छ (पहिलो फोटो) सेतो र aboveको माथि र सेतो र ,्गले, तिनीहरूले वर्षालाई संकेत गर्दछ र आँधीबेहरी, ती धेरै खतरनाक छन् भित्र ठूलो आइस स्टोनको साथ। र अन्तमा टोररेकुमुलस (अन्तिम फोटो) धेरै खतरनाक र ओर्लने हावाहरूसँग सबैभन्दा खतरनाक हो।
रिकार्डो रुइज भन्यो
कुहिरो र टुर्नाडो हराइरहेको छ?
रिकार्डो रुइजलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले सुधार गरेको छु, मेरो अघिल्लो टिप्पणीमा मैले ठाडो बादललाई स .्केत गरिरहेको थिएँ, तिनीहरूसँग निम्न वर्गमा आधार छ र मध्यम कोटीमा जान्छ। कमुलस क्लाउडहरू केवल कम कोटी मात्र हुन् र जहाँ तपाईं कम बादलहरू कम र मध्यम बादलहरूको बीचको मिश्रण हो भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ मैले सहयोग गरेको छु
यो अविश्वसनीय जानकारीको लागि धन्यबाद जसले मलाई मेरो व्यावहारिक कार्यको लागि मद्दत पुर्‍यायो 😅😅 साथै धन्यबाद पनि यस जानकारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र बुझ्न गाह्रो शब्दहरू भए पनि
NOA लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ कि यो राम्रो छ कि उनीहरूले यो जानकारी साझा गरे जस्तै यो जीवनसाथीको समयमा कुराकानी शीर्षकहरू प्रदान गर्दछ
जानकारीको लागि धन्यबाद, यो धेरै राम्रो छ, यसले मलाई धेरै मद्दत गरेको छ !!! 😁😁